အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ရွှံ့စေး၏သီလ - AFRIKHEPRI
Lရွှံ့သည်မရေမတွက်နိုင်သောသီလနှင့်ပြည့်စုံသောအသိဉာဏ်ရှိသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကုသခြင်း၊ antiseptic၊ disinfiltrating, exuding and exorcising ဖြစ်ပါသည်။ ပိုကောင်းသေး! ပိုးမွှားများ၊ ဗက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများဖြင့်ပပျောက်သွားသည်။
စုပ်ယူမှု, ရှိသမျှအဆီများကိုလျော့ချ, ထောပတ်နှင့်မုန့်ဖို့ကြိုတင်ဆယျ့ငါးရကျ။
မည်သည့်စုပ်ယူမှုကိုမဆို ၈ ရက်အလိုတွင်အဆီနှင့်ဝက်အူချောင်းများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ရွှံ့စေးနေသည့်ပထမနေ့မှနောက်ဆုံးနေ့အထိသဘာ ၀ ဓာတ်သတ္တုရေတစ်လီတာနှင့်တစ်ဝက်ခန့်အပြင်ဘက်တွင်သင်သောက်သုံးသင့်သည်၊ ၎င်းကိုသင်၏ကုသမှုခံယူရာနေ့တိုင်းစနစ်တကျသောက်ရမည်။
သင်ဘယ်တော့မှမယူဘူးဆိုရင် ရွှံ့, သင်မလိုချင်တဲ့သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်စမ်းသပ်ကာလကိုဖြတ်သန်းရပေမည်။ ဒီကုသမှုက ၆ ရက်ကြာပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရိုးလေးပါ။ ယူပါ ရွှံ့စေး (စမ်းသပ်ကာလအတွင်းအဖြူနှင့်သင်၏ပထမဆုံးကုသမှု၊ အောက်ပါကုသမှုများအတွက်အဖြူသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်) ။
သန့်စင်သောတွင်းထွက်ရေတစ်ခွက်တွင်ရွှံ့အမှုန့်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်လုံးကိုအိပ်ရာမဝင်မီညနေခင်းတွင်အရည်ပျော်အောင်ထားပါ။ တောက်ပနေသောရေကိုမသောက်ပါနှင့်။ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်မိနစ်လျှင်မြန်စွာလှုပ်ပါ
နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်သင်နိုး။ အချည်းနှီးသောအစာအိမ်တွင်ရွှံ့ရေအများဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံကိုသောက်ပါ။ ဖန်ခွက်အလွန်အကျွံမရွှေ့ရန်ဂရုစိုက်ပါ။ ထို့ကြောင့်သိုက်ရွှံ့သည်သင်သောက်သောရေတွင်မပြန့်နှံ့သွားစေရန်။
ပထမဦးဆုံးတဆယ်နှစ်လုံးကိုရက်ပေါင်း (အထကျကရှင်းပြသည်ကဲ့သို့) သင့်ရဲ့ရေကိုသောက်argilée။
လွန်ခဲ့သောရှစ်ရက်ကသင်သည်ရွှံ့ရေကိုမသောက်ရတော့ဘဲရွှံ့ရေသည်လွန်ခဲ့သောမနက်ရှစ်ရက်ဖြစ်လျှင်ရေနှင့်ရွှံ့စေးကိုကောင်းစွာနှိုးဆွပြီးနောက်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းသောက်ရမည်။ ဖန်ခွက်။ စုပ်ယူပြီးနောက်သင်ကြိုက်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုစီစဉ်ထားပါ။ အမှန်မှာဤအံ့ဖွယ်အရာသည်ပါးစပ်တွင်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်အရသာရှိသည်!
စမ်းသပ်ကာလများအပြင်တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ပေါင်း (တစ်ရက်လျှင်ရက်ပေါင်း ၄၀) မှရွှံ့စေးဆေးနှစ်မျိုးထက်မပိုစေပါနှင့်။
အကောင်းဆုံးသောအချိန်များမှာနွေ ဦး ရာသီနှင့်နှောင်းပိုင်းကျဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမအစာစားချိန်တွင်အချို့သောပြfeelနာများသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိသင့်သည် - အူလမ်းကြောင်းတွင်အူမကြီးခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပူပြင်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ သို့သော်သင်သောက်သုံးသောပမာဏကိုလေးစားပါကအရေးမကြီးပါ။ ရေကိုသောက်ပါ၊ ဖက်တီးအက်စစ်၊ ချောကလက်၊ ရက်စွဲများ၊
ဆန့်ကျင်ဖက်လက္ခဏာသုံးမျိုးရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် homeopathic ကုသမှုထက်အခြားတိုးတက်မှုတစ်ခုအားကုသမှုခံယူပါက၊ သင့်တွင်မြင့်မားသောသွေးဖိအားနှင့် spastic သို့မဟုတ် atonic ချုပ်လျှင်။
ဒါဟာလုံးဝကိုယ်ဝန်မဆိုက MONTH ကို AT ရွှံ့နှင့်ဤဒသမျှမည်သည့်လမ်းအတွက်သုံးစွဲဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
ရွှံ့သဘာဝထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလွန်အကျွံသုံးစွဲအတွက်အသုံးပြုမယ့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး! ကောင်းစွာနေ့စဉ်ဆေးများကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုသင်၏ကျန်းမာရေးတို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး။
လူတို့တွင်ရွှံ့စေးကိုကုထုံးဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အလိုလိုအနားယူရန်လိုသောအလိုအလျောက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အကြောင်းမှာဤအကျိုးရှိသောမြေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အားသတ္တုဓာတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်များကိုပြန်လည်ထိန်းညှိနိုင်သည့် metalloids များ၌လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများ ပထမဆုံးaကိုစတင်အသုံးပြုပါ ရွှံ့သွားတိုက်။ သို့သော်အခေါင်းပေါက်များတွင်အထွေထွေသွားတိုက်ခြင်းအပြင်သွားဖုန်မှုန့်ရွှံ့ထဲသို့ရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်သင်ရရှိသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောရွှံ့ဖြင့်သွားသည့်သွားလိုင်ကိုဖြည့်ပါ။
သစ်သား၏ခွဲထွက်အဖွဲ့: သေးသေးလေး, ဒါပေမယ့်အိုးဘယ်လောက်မနှစ်မြို့ဖွယ်။ သစ်သားသေးသေးလေးကိုမဖမ်းနိုင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲစိတ်ရန်တွန့်ဆုတ်လေ့ရှိသည်။ ဖြေရှင်းချက် - သင်၏လက်ချောင်းကိုရွှံ့ရေဖြင့်ရေချိုးနိုင်သည်။ ဤရေချိုးနည်းသည်အသားကိုနူးညံ့စေပြီးရွှံ့စေး၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ပြakerနာဖြစ်စေသူကိုသဘာ ၀ မကျေပွန်စေဘဲဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
hay fever: သီးနှံဖြတ်တောက်ခြင်းမှဖုန်မှုန့်များနှင့်ဖုန်မှုန့်များသည်နှာခေါင်းမှတစ်ဆင့်ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်ချွဲအမြှေးပါးများအတွင်းသို့ကျရောက်သည်။ သူတို့ရှိနေခြင်းသည်၎င်းတို့အားအလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ တစ်နေ့လျှင်နှာခေါင်းကိုရွှံ့ရေဖြင့်ဆေးပါ။ ထို့နောက်နှာချေခြင်းရပ်ပြီးသည်နှင့်ရွှံ့ရေကိုသုံးပါ။ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း (သို့) အအေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းစသည်တို့ကိုနှာခေါင်းအတွင်းသို့တင်ပါ။ သင်၏အထိခိုက်မခံမှုနှင့်ဤအပလီကေးရှင်းများအပေါ်သင်၏တုံ့ပြန်မှုများအရရွေးချယ်ရန်မှာသင့်အပေါ်မူတည်သည်။
ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ သဘာဝပisိဇီဝဆေး -“ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်သျှူးများဖြစ်သောဆဲလ်များကိုပျက်စီးစေခြင်းဖြင့်ပိုးမွှားများကိုသေစေနိုင်သည့်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးအချို့တွင်အားနည်းချက်များမရှိပါ” (Dr. Valnet) ။ အဓိကအားဖြင့်ရွှံ့ထဲတွင် silicic acid ပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးများပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်နက္ခတ္တဗေဒ၊ သန့်စင်မှုနှင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
တီးရီးယားရောဂါပိုး: အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင်များ၊ တီကောင်များကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကုသရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည် ခန္ဓာကိုယ်။
စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောပါဝါ: စုပ်ယူသောကြိယာ၏: မျက်နှာပြင်ထိုးဖောက်မှုအားဖြင့် fix ။ ရွှံ့စေးသည်အနံ့ဆိုးများကိုစုပ်ယူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤစွမ်းအားသည်ကြက်ဥများထိန်းသိမ်းခြင်းကို Far Eastern ပုံစံဖြင့်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူတိုင်းကတရုတ်“ ပုပ်နေသောဥ” အကြောင်းကြားခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားကြက်ဥပုပ်မဟုတ်ပေမယ့်ရွှံ့မြေ၌သိုထားသောကြက်ဥ "(ဒေါက်တာ Valnet) ။
Degreaser နှင့် DECOLOURANT- ရောမအဝတ်လျှော်များသည်ပိတ်ချောကိုရွှံ့ရေဖြင့်နင်းပြီးမြေကြီးပေါ်ရှိမြေကြီး။ ယူအက်စ်အေတွင်ရေနံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပိုမိုပြည့်စုံသောမြေကြီးကိုအသုံးပြုသည်။ ရေနံယိုဖိတ်မှုကိုမရပ်တန့်သေးပါ။
ကိုစုပ်ယူပါဝါ: hydrophilic ။ ၄ င်း၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရနံ့များနှင့်အနံ့များအထိပါသောကြောင့်အလွန်အမင်းနံ့သာထွက်သောအငွေ့များဖြစ်သည်။
၎င်းင်း၏မြင့်မားသော silica ပါ ၀ င်မှုသည်အထူးသဖြင့် arteriosclerosis, အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်အခြေအနေများကိုကုသရာတွင်၎င်းကိုဖော်ပြသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်၊ သံ၊ ကယ်လ်စီယမ်တို့၏ကုထုံးတွင်အရေးပါမှုသည် astenia၊ demineralization၊ ကင်ဆာ၊ သွေးအားနည်းရောဂါများတွင်ရွှံ့ဖြင့်ကုသခြင်း၏အခန်းကဏ္explainကိုရှင်းပြရာတွင်ကူညီသည်။
ပြင်ဆင်မှု: ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွှံ့စေးဖြင့်ရွှံ့စေးများကိုကွန်တိန်နာထဲသို့သွန်းလောင်းသည် (ကြည်လင်သော၊ ပလတ်စတစ်နှင့်သတ္တုကိုရှောင်ပါ) ။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောမော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ပျော့ပျောင်းသောအထူရှိသောငါးပိအထိမွှေပါ။ လူတစ် ဦး သည်ရွှံ့များကျိန်းနေသည့်နေရာတွင်ရေဖုံးလွှမ်းထားသောအိုးတစ်လုံးလည်းအမြဲတမ်းရှိနိုင်သည်။
poultices: သူတို့ကို 1/2 မှ2စင်တီမီတာအထူ။ နှင့်ကုသဒေသထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့areaရိယာ။
အအေး: ရောင်ဒေသများသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်ပေါ်, ပူနွေးလာသည်နှင့်မကြာမီ (အသစ် ၁၅ မိနစ်မှမိနစ် ၃၀) ကြာအောင်အသစ်ပြုလုပ်ပါ။ အမြဲတမ်းအအေးမိသည်ဟုခံစားရပါကနွေးထွေးသောဆေးဖြင့်အစားထိုးသင့်သည်။ အဖုကိုသင့်လျော်သော decoction သို့မဟုတ် infusion ဖြင့်စိုစွတ်သောရွှံ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပူနွေးသောသို့မဟုတ်ပူကျောက်ကပ်၊ ဆီးအိမ်နှင့်အရိုးများ။ အညစ်အကြေးကိုအရေပြားနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
Compression: အချို့သောလေထုညစ်ညမ်းမှုများ၊ varicose vines များသည်အနည်းဆုံးကုသမှုအစတွင်၊ poultices သို့မဟုတ် plasters သို့မသွားမီဖိအားများအသုံးပြုခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ Compress များကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်ရွှံ့စေးကိုရွှံ့စေးဖြင့်အရည်အဖြစ်ထည့်။ ပလတ်စတစ်ဖြင့်စိမ်ပါ။ ဖိအားများ၊ ထည်ခါးပတ်များသို့မဟုတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်တီးဝိုင်းများမှတဆင့်သိသာစွာကုသသောဒေသများပေါ်တွင် မူတည်၍ ဖိအားများသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများကိုနေရာတွင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ရွှံ့ရောင်: ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုချည်ရေနှင့်ဖိပြီးအရေပြားဘေးတွင် ၀ တ်ပါ။ ထို့နောက်အပူကိုထိန်းသိမ်းရန်အဝတ်နှင့်ဖုံးပါ။
လျှောက်လွှာ၏ကာလ: အမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်၊ ၁ နာရီမှ ၃ နာရီ၊ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ညတည်းဖြစ်သည်။ (ဥပမာ - အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းဥပမာ) မနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားမှုများရှိပါကအင်းအားဖယ်ရှားပါ၊ ၁၂ မှ ၂၄ နာရီအကြာအထိမစတင်ပါ။ အကယ်၍ အတက်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာခြောက်သွားလျှင်၎င်းကိုအခြားတစ်ခုနှင့်လျင်မြန်စွာအစားထိုးသင့်သည်။ ရေငွေ့သို့မဟုတ်ဖိအားကိုဖယ်ရှားလိုက်သောအခါရေနှင့်ကပ်လျက်ရှိနေသောအမှုန်များကိုရိုးရှင်းသောရေဆေး (အအေးသို့မဟုတ်ပူနွေးသောရေ) ဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
လျှောက်လွှာ Rhythm: ဒါကြောင့်သိသာကုသခံရဖို့ချစ်ခင်နှင့်လူနာများ၏တုံ့ပြန်မှုအရကွဲပြားသည်။ အိုင်းနာသို့မဟုတ်ဆူပူမှုဖြစ်သည့်အခါလိုအပ်ပါက poultices များကိုနှစ်နာရီ၊ နေ့ရောညပါတိုင်းသက်တမ်းတိုးသင့်သည်။ တစ်ညသို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးရန်ရိုးရှင်းသောချုံ့စက်ဖြင့်ညဥ့်ကိုသင်အစားထိုးနိုင်သည်။
lumbar, နိမ့်ဝမ်းဗိုက်, ဝမ်းဗိုက်နှင့် Hepatic ဒေသများတွင်, ဒီ applications များအမျိုးမျိုးသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၄ နာရီအထိတစ်ကြိမ်သာကြက်ငှက်တုပ်ကွေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာကန့်သတ်ထားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ သငျသညျတညဉ့်လုံးအညစ်အကြေးစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
မျိုးစုံတစ်ပြိုင်နက် applications များလုပ်မထားပါနဲ့။ ကိစ္စတွင် poultices (ဥပမာဝမ်းဗိုက်နှင့်အဆုတ်,) တော်တော်များများသောနေရာများပေါ်တွင်သတ်မှတ်သည်သည်ကွဲပြားခြားနားသော application များအကြားသုံးနာရီကြားကာလပျှမ်းမျှကိုစောင့်ရှောက်မည်။
၎င်းသည်အဆိပ်ပါ ၀ င်သောကြောင့်အသုံးပြုပြီးနောက်ရွှံ့စေးကိုဖယ်ရှားပါ။ ငါတို့အသုံးပြုသောပိတ်ချော၊
မုန့်ညက်ဖို့အစာအိမ်, ရင်ဘတ်နှင့်ကျောက်ကပ်အပေါ် applications များနီးကပ်လွန်းအောင်မထားပါနဲ့။
NB- ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးပါပြီ။ သို့သော်ရွှံ့စေးသည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရေမြောင်းမှအစပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းအထိဖြစ်စဉ်များကိုအစပျိုးစေသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအသုံးပြုမှုအစတွင်အခြားတက်ကြွသောဆေးဖက်ဝင်နည်းလမ်းများအရချစ်ခင်တွယ်တာမှုပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အနာ၊ အသစ်နာကျင်ခြင်း) - အရေးမကြီးပါ၊ ဆက်လုပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးသောဆေးကိုအမြစ်တွယ်စေသောသက်ရှိဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းအထူထူ (၁.၂ စင်တီမီတာ) သို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖိသိပ်ခြင်းမရှိသည့်သေးငယ်သော poultices များနှင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းမှသာ 1 cm အထိ poultices ကိုအသုံးပြုမည်။ လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်သည်အများဆုံး ၁ နာရီမှ ၂ နာရီအထိ ၄ နာရီအထိသွားလိမ့်မည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရွှံ့ကောင်းစွာထောက်ခံရှိရာကိစ္စများတွင်။
အမှုန့် : ရွှံ့စေးကိုဖုန်မှုန့်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသောအကန့်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအစားထိုးဖြစ်သည်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ဖြစ်သည်။
Beauty မျက်နှာဖုံးများ : အမြဲတမ်းသတိမပြုမိဘဲမကြာခဏရောင်းချသည့်စောင့်ရှောက်မှု၏မျက်နှာဖုံးများသည်ရွှံ့များပါ ၀ င်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်သောရွှံ့စေးဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးအကျယ်ချွေတာနိုင်သည်။
ဤပြင်ဆင်မှုသည်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ပါးလွှာသောအလွှာတွင်ပျံ့နှံ့ပြီး ၁၅ မိနစ်မှမိနစ် ၃၀ အတွင်းကွဲပြားနိုင်သည်။ ပူနွေးသောရေဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထိုသို့သောမျက်နှာဖုံးသည်သာကောင်းကျိုးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရေပြားကိုဖြေလျော့ပေးပြီးအရေးအကြောင်းများကဲ့သို့ဝက်ခြံ၊ မျက်နှာအရေပြား၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သံလွင်ဆီနှင့်ရောနှောမှုန့်ရွှံ့, အရေပြားရောဂါဖြစ်ပွားမှုအားလုံးကိစ္စများတွင်ထိရောက်သော softening မုန့်ပေးသည်။
အင်္ဂါဇာတ် & ENEMA Injection - ရေတစ်လီတာလျှင် ၃ ဇွန်းမှ ၄ ဇွန်းဇွန်းနှုန်းဖြင့်ရွှံ့ရေထည့်ပါ။ အနည်းငယ်အေးစေ။ အဖြူရောင်ဥတု၊ မက်ထရစ်စ်၊
MUD ရေချိုး : လူတိုင်းတွင်အိမ်၌ရွှံ့ရေကန်ရှိသည်မဟုတ်သော်လည်း ၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသောသာမာန်ရေချိုးကန်နှင့်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်သင်အလွယ်တကူရွှံ့ရေချိုးနိုင်သည်။ နွေးသောရေကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်အကြိမ်များစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် (နေရာရှိပါက) ရွှံ့ရေကိုလွယ်ကူစွာပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက်သီးခြားလွတ်လပ်သောစီးဆင်းမှုဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သီးသန့်ထားသည့်ရေချိုးကန်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ရွှံ့ဗန်းများသည် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်၊ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ တစ်လကိုတစ်ပတ်နှစ်ခါခေါ်သွားမှာပါ။ တစ်လတာပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပါ။
အထူးသဖြင့်အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း (သို့) အရိုးရောဂါများနှင့်သွေးအားနည်းရောဂါအတွက်အလွန်ထိရောက်သည်။ ဒေသခံရေချိုးခြင်းကိုဥပမာအားဖြင့်လက်များနှင့်ခြေထောက်များကိုလေဖြတ်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
SALT : ပင်လယ်ဆားငန်ဖြင့်ဆားငန်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရွှံ့စေး၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မသန့်စင်သောဆားများသည်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကုသရာတွင်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုအမြဲရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ဘရိုမိုင်း၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ကြေးနီ၊ ဖော့စဖရပ်စ်၊ ကယ်လစီယမ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အချို့သောချို့တဲ့မှုများကိုကုသရာတွင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်။
SOURCE မှ: http://www.biopur.fr/content/13-les-bienfaits-de-argile
L'Oreal Paris - Detoxifying Face Mask - သန့်စင်သောရွှံ့စေး - 50 ml
€ 6,14 ကိုဝယ်ပါ
ဆေးညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်း - Light Face မျက်နှာဖုံး - Vegetal Gold - မူရင်း 97,2% ...
€ 18,00 ကိုဝယ်ပါ
မျက်နှာဖုံးအခွံ၊ Blackhead မျက်နှာဖုံး၊ ရွှံ့စေး၊ ရွှံ့မျက်နှာဖုံး၊
€ 15,99 ကိုဝယ်ပါ
PraNaturals ၁၀၀% သဘာဝမျက်နှာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာမျက်နှာဖုံးသည်ရွှံ့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်
Dead Sea ရွှံ့မျက်နှာဖုံး 200g LARGE - သဘာဝအတိုင်းသန့်စင်ဆေးကြောရန် ...
ရွှံ့စေးမျက်နှာဖုံး Bubble ရွှံ့မျက်နှာဖုံး Hydrating ကာဗွန်နိတ်နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး ...
€ 13,99 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 14, 2020 4:23 ရက်စွဲပါ